I-imeyile Umthengisi amaxabiso Izohlwayo
Sibe namahla ndinyuka njengoko sijonga umboneleli ngenkonzo we-imeyile olungileyo. Uninzi lwababoneleli beenkonzo ze-imeyile abanazo izixhobo zokudibanisa esifuna ukuzenzekelayo xa sithumela i-imeyile (siza kuba neendaba kungekudala)… kodwa eyona ngxaki inkulu esinayo ngenkqubo ye-imeyile kukukwazi ukuthelekisa ukwenza imali ne Iindleko zesicelo.
Ukufikelela ngqo kwinqanaba, ezinye izakhiwo zexabiso le-SaaS zibubudenge ngokucacileyo ... ukohlwaya ukukhula kwenkampani yakho kunokuba kuyivuze. Into endiyilindeleyo njengeshishini okanye umthengi kukuba kokukhona ndisebenzisa inkonzo yakho, izibonelelo zeendleko kufuneka zihlale zicabalele okanye ziphuculwe (ngamanye amagama - iindleko ngokusetyenziswa kwazo zihlala zinjalo okanye ziyehla). Oku akusebenzi kumaxabiso anyukayo afumanekayo- ngakumbi abathengisi be-imeyile.
Nantsi amaxabiso esidlangalaleni omnye wabathengi (Ixabiso leNyanga kunye nababhalisi):
Ekuboneni kokuqala, kubonakala ngathi kuyahambelana… ababhalisi abaninzi bongeza iindleko ezinkulu zenyanga. Ingxaki kukutshintsha, nangona kunjalo. Masithi ndithumela kubabhalisi abangama-9,901. Yiyo i $ 75 ngenyanga. Kodwa ukuba ndongeza ababhalisile abangama-100, ndisengxakini. Iindleko zam zenyanga ziphindwe kabini ukuya kwi- $ 150 kwaye indleko zomrhumeli ngamnye zonyusa iipesenti ezingama-98. Ngombhalisi ngamnye, iindleko zokusebenzisa le nkqubo ziphantse zaphindeka kabini.
Oku kwakukubi kakhulu kumthengisi wethu wangoku kangangokuba ndiyekile ngokoqobo ukuthumela kulo lonke uluhlu lwam. Iindleko zethu zivela kwi- $ 1,000 ngenyanga zaya malunga ne- $ 2,500 ngenyanga kuba ndinabhalisi abangama-101,000. Ayikuko ukuba ndicinga ngokuhlawula ngaphezulu ngokuthumela ngaphezulu… kuyinyani ukuba kukho inyathelo-leendleko kwiindleko endingenakuziphinda ngokusebenzisa iinzame zethu zokuthengisa okanye inkxaso-mali. Ngombhalisi, iindleko zam zingaphindeka kabini. Kwaye andinakukwazi ukuyibuyisa loo ndleko.
Isoftware njengababoneleli ngeenkonzo kufuneka ijonge ngokusondeleyo kwiinkqubo zokusetyenziswa kweentlawulo ezinje ngeAmazon okanye iiphakheji zokubamba ezinemingcele apho amaxabiso ehla xa ukhulisa ishishini lakho. Kuya kufuneka ulivuze ishishini elikhulayo, ungohlwayi. Ukuba ndinoluhlu lwe-101,000, omnye umthengi onoluhlu lwe-100,000 akufuneki ahlawule ngaphantsi ngomrhumi kunam. Sisidenge nje eso.
Ukukhuthaza ukwahlulahlula i-imeyile kunye nokwenza ubuNtu
Omnye umba kwezi nkqubo ubhatalela inani labafowunelwa kwinkqubo yakho kunokuba ungathumela malini ngayo. Ukuba ndinedathabheyisi yesigidi sedilesi ze-imeyile, kuya kufuneka ndikwazi ukuyingenisa ngaphakathi, ndiyithumele kwaye ndiyithumele kwinxalenye endaziyo ukuba iya kubonelela ngomsebenzi omkhulu.
Uninzi lwezi nkqubo luhlawulisa ngokobungakanani beenkcukacha zakho endaweni yokusebenzisa inkqubo. Unoko engqondweni, ungazityhola njani iinkampani ngebhetshi kunye nokuqhushumba? Ukuba uza kuhlawuliswa wonke umntu obhalisileyo, unokuthumela kubo bonke ababhalisi!
Ngenxa yolu xabiso, ezi nkampani zinyanzelisa isandla sam. Ngelixa ndinokumthanda umthengisi kwaye ndiyayixabisa inkonzo yabo, iindleko zeshishini zonyanzelisa ukuba ndihambise ishishini lam kwenye indawo. Ngelixa ndingathanda ukunamathela kumthengisi olungileyo, andinayo imbiza yemali yokungena xa ndidibanisa ababhalisile abayi-100 kwiziko ledatha yam.
tags: Iindleko ze-imeyileIxabiso le-imeyileI-imeyile yokuthumela indlekoUmboneleli wesevisi ye-imeyileumthengisi wemeyile
Iinkcukacha ezithe kratya, eminye iMiceli mingeni